रौतहटमा मोटरसाइकल दु’र्घटना, दुई जनाको मृ’त्यु - समृद्ध नेपाल
रौतहट : गरुडा नगरपालिका- ४ मा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृ’त्यु भएको छ । मृ’त्यु हुनेमा रौतहट जिल्लाको गढीमाई नगरपालिका ८ का १९ वर्षीय महमद अलताफ आलम र २५ वर्षीय रवि साह रहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका डीएसपी श्रीराम भण्डारीले जानकारी दिए।
राती करिब १२ बजे गरुडाबाट समनपुर जाने सडकमा ना ६२ प ३३९९ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दु’र्घटना भएको उनले बताए। उनीहरुलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृ’त्यु भएको हो। प्रहरीले घट’नाबारे अनु’सन्धान गरिरहेको छ।(फाइल तस्बिर)
यो पनि : माघेसंक्रान्तिको दिन खिचडी खाने, मेला भर्नेहरू त्यतै व्यस्त थिए। गुल्मी छत्रकोट ३, न्वाराका शोभाखर पन्थलाई भने दिनभर फुर्सद थिएन। भिडियोग्राफी र कलाकारितामा रहेका उनले दिनभर बुटवलमै भिडियो खिचे र साँझसम्म मिक्सिङ गरिरहे। साँझ साथीकोमा माघी मनाउन तामनगर पुगे। श्रीमती स्वस्तिकाले कतिखेर घर आउनुहुन्छ भनेर फोन गरिन्। एकैछिनमा आउँछु भनेर फोन काटे।
स्वस्तिका ग’र्भवती छिन् यही माघ २२ गते बच्चाको जन्म हुने मिति चिकित्सकले दिएका छन्। माघे संक्रान्तिको दिन दिदीको घरमा थिइन्। माघ २ गते सबेरै स्वस्तिकाले शोभाखरलाई फोन गरिन्। फोन प्रहरीले उठाए। ‘तपाईंको श्रीमान् दुर्घ’टनामा पर्नुभएको छ। उपचार हँुदैछ, लुम्बिनी अस्पतालमा आउनुस्, भनेर फोन राखिदिए। एकैछिनमा घर आउँछु भनेर फोन काटेका शोभाखर योगीकुटी मगरघाट हुँदै बुटवल जाँदै थिए ।
बुटवल र तिलोत्तमा नगरपालिकाको सीमाको सो सडकमा विद्युत्, प्राधिकरणले विद्युत्को तार जमिन मुनि गाड्ने काम गरिरहेको छ। जसको ठेक्का महावीर चन्द निर्माण कम्पनीले पाएको छ। कम्पनीले सडक छेउमा सातफुट गहिरो नाली खनेको छ। तर, नालीको छेउछाउमा खत’राको संकेत राखिएको छैन। न त्यो नालीलाई डोरीले घे’रिएको छ। तामनगरबाट जोगिकुटी निस्किँदै गरेका शोभाखर राति ११ बजेतिर मोटरसाइकल सहित त्यही नालीमा खसे।
ठेकेदार कम्पनीले ८लाख क्ष’तिपूर्ति दिन तयार भएको आफन्त उषाकिरण पन्थले जानकारी दिइन्। तर,ठेकेदारलाई कारबाही भने गरिएको छैन। पूर्वाधार निर्माणका क्रममा गरिएको सामान्य लापरबाहीले ३२ वर्षीया शोभाखरले ज्या’न गु’माए। ०७० सालमा स्वस्तिका सँग विवाह गरेका शोभाखरका ७ वर्षीय छोरा छन्। स्वस्तिका काज किरियामा छिन्। ‘त्यही नालीले मेरो श्रीमान्को नि’धन भयो। हामीले न्याय कसरी पाउने ?, उनले भनिन्, ‘खत’राको केही संकेत राखि दिएको भए आज यस्तो दिन आउने थिएन।’ अन्नपुर्ण पोस्टमा खबर छ ।
खचाखच यात्रु बोकेको बस दुर्घटना २० जनाको मृत्यु !
शिभ रात्रीमा पशुपतिको बागमती पुल भत्कियो, २ जना घाइते, एक अर्धचेत
विदेश गएको १० महिनामै श्रीमती जेलमा ,जसरि भएपनि नि’काल्नुस बुढा होइन भने यो चि’ठिनै अन्तिम ..
अरुण नदीको पुलमा एकै चोटि तिन वटा ट्रक तर्दै गर्दा भाचियो !
यो वर्षका संसारकै राम्रा-नराम्रा पासपोर्टको सूची सार्वजनिक, जान्नुहोस नेपाल कुनमा परे ?
श्रीमती धेरौ सुन्दर र स्मार्ट हुँदा श्रीमान प्रहरी समक्ष नै पुग्नपर्यो, कारण थाहा पाउदा जो कोहि हैरान !
अचानक छोरीको मोबाइल बाउ आमाले खोलेर हेर्दा पूर्ण पाठ सहित !